Tabliiqu Waa Naxariis Alle Aadamaha U Soo Diray. Qalinkii: Sadam Osman Kaabash. | Hangool News
Tabliiqu Waa Naxariis Alle Aadamaha U Soo Diray. Qalinkii: Sadam Osman Kaabash.
Geelu waa meesiga ugu nafciga badan bulshada soomaalida waagaan iyo berisamaadkiiba. Waana isha keliya ee heliddeeda laga qaadi jiray tookh iyo isla weyni. Waa kii abwaankii soomaaliyeed la haa “Ragga laxaha sii dhawrayaw dhaqasho waa geel”. Taas waxaan uga socdaa beryahan danbe waxaa geyiga soomaalida Alle ugu deeqay rag. Raggaas oo diinta koboceeda bulshada dhexdeeda kaalin weyn ka qaatay, kuna suntan inay yihiin halyeeyo diimeed. Waa kooxda Jamaaacatu Tabliiq aynnu ku magac dhabno. Waxay masjidkasta iyo suuq kasta ka wadaan baraarujin diimeed iyagoo dadaalkooda iyo kartidooduna tahay mid Alle ku mannaystay sahayna uga dhigay. Waa koox inoo ah nasri iyo badbaado ka dhan ah shaydaanka iyo ciidankiisa. Waxay
xambaarsanyihiin oo ay sida webi buttaacaya kugu shubayaan erayo aan inta badan qalbigaaaga ku soo dhacayn, ayna kaa mashquulinayso dhexgaddoonka waayaha adduunyo. Waa koox xambaarsan oo sahay ay u tahay weynaynta Alle iyo xusiddiisu. Tabliiqu waxa shabbahaa mawtka marka uu ku waaninayo. Waxa uu kaa ka xaynayaa dhalanteedka Arladan buux dhaafiyey, waxaanu ku xasuusinayaa awoodaha macbuudka iyo nimcooyin uu aadamaha ku galladay ase aanay si guddoonsan uga faa’iidaysan. Wacdiga iyo khudbadda uu Tabliiqu hal mar kuu laqimaaa waxay la mid tahay boqolaal khudbadood oo wadaad kale kaaga mariyey masjid ama goob muxaadaro. Sidaas awgeed, waa sababta uu Tabliiqu inta badan ugu guulaysto in uu dad nolasha ka huleelay oon cid iyo ciirsi lahayn laguna tiriyo saaqidiin, gaalo, tuug—-IWM, ay nolosha ugu soo dabbaalaan oo ay uga dhigaan rag tii Alle ee ay dayaceen iyo toodiiba geed saara, mustaqbalkana u guntada sidii ay saaxiibbadoodii ay isku degelka ahaayeen u soo xero gelin lahaayeen.
Tabliiq, waa naxariis Alle u soo diray duul si rabbaaniya nolosha uga dhacay, caloolyow iyo ciilkaambina wehel ka dhigtay, rajo la’aan iyo mugdina ka taagan Arladan. Markii Alle waafajiyeyna u soo mudhyidhi arlo iftin iyo muuq bilicsan leh, rajadii luntayna dhaayahooda dhexdooda ka helay, caloolyawgiina digri ugu bedeshay. Ciilkaambigiina udgoonka dacwada loogu dooriyey.
Waa koox ammin kasta hugooda iyo hoygoodu yahay masjid, hadalkooda iyo sheekadooduna tahay dacwadda, dhaqankooduna yahay digri.